Podcast 9x13: Waxay ku dhowdahay Kirismaska ​​Apple | Waxaan ka socdaa mac
Hal usbuuc ka badan waxaan la kulanay ragga ka socda Actualidad iPhone iyo Soy de Mac si aan ugala hadalno wararka sheegaya in usbuuca uu na keenay Apple. Mar labaad, waxaan aragnay sida Apple aysan sifiican wax usameyn, tan iyo dhamaadkii usbuucii lasoo dhaafay, gaar ahaan jimcihii, inbadan waxay ahaayeen isticmaaleyaashii bilaabay inay la kulmaan reboots-ka iPhone-kooda markasta oo ay helaan cusbooneysiin, taas oo Apple ku qasbay inuu sii daayo nooca ugu dambeeya ee iOS 11.2 ka hor jadwalka iyo dhowr saacadood ka dib markii la sii daayay beta lixaad oo isku nooc ah.
Waxaan sidoo kale ka faallaynay wararka xanta ah ee isa soo taraya ee ku saabsan suurtagalnimada taas Amazon waxay kordhisaa qiimaha adeegyadeeda Prime, adeeg hadda qiimehiisu yahay 19,99 euro sanadkii oo aan kaliya na siinin maraakiib bilaash laakiin sidoo kale waxay na siisaa marin u helka adeegga fiidiyowga ee shirkadda Jeff Bezos '.
Waqtiga kirismaska ​​wuu sii yaraanayaa waana yar yahay, kuwa naga mid ahna ee sameeya barnaamijka podcast-ka, waanu ka fikirnay waad ku mahadsantahay kalsoonidaada qamaar, Isku aadka oo aan weli la xaqiijin, laakiin in guuleystuhu la imaan karo luul hadiyad ahaan loogu talagalay Kirismaskan. Ma aha iPhone X, waxaan u leeyahay wixii hadda ka dambeeya, maaha in kor loo qaado rajooyinka.
Kooxda All Apple waxaan kulannaa Talaado ama Arbaco, maaddaama aan ka soo tagno shaqada guriga iyo qoyskeenna wixii ka dambeeya 12 habeenimo. Haddii aad rabto inaad nagala qaybqaadato, waad ku dhammayn kartaa kanaalkeena YouTube, halka aan toos uga tabino waxaad na weydiin kartaa su'aalaha aad rabto.
Haddii lid ku ah, waxaad doorbideysaa inaad na dhageysato markii aad awoodid, sidoo kale waxaad ku sameyn kartaa iTunes, ka mid noqoshada kanaalkayaga, si markaa si otomaatig ah mar kasta oo aan u soo dhigno dhacdo cusub, si otomaatig ah loogu soo dejiyo qalabkaaga oo aad marwalba gacanta noo hayso inaad na dhageysato
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Podcast 9 × 13: Waxay ku dhowdahay Kirismaska ​​at Apple